I-Paxful, Inc. ne-Paxful USA, Inc. (iyodwa nangokuhlangene, “Inkampani”), kuhlanganiswe ngaphansi kwemithetho ye-State of Delaware inikezela ngamasevisi ngendawo yokumaketha yontanga enikezelwe i-inthanethi (“P2P”) ngokuthenga nokuthengiswa kwamafa wedijithali.
Inkampani ibhaliswe njenge-Money Services Business ne-United States Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network (“FinCEN”). Izinqubomgomo nezinqubo ze-Anti-Money Laundering (“AML”) ze-Paxful zenzelwe ukwehlisa imisebenzi enkundleni, ukuvikela abasebenzisi, ibhizinisi, nezimali zedijithali nemiphakathi yamasevisi wezimali ekuxhashazweni izigebengu. Inkampani ithobelana nezimfuneko ze-Bank Secrecy Act nemithetho nemihlahlandlela ye-FinCEN.
Njengengxenye yezinqubomgomo Zokuhambelana ze-Paxful, izinqubomgomo nezinqubo ze-Know Your Customer (“KYC”) kukhasimende ngalinye nelezinhlangano zenzelwe ukuvumela Inkampani ukwenza ukukhohlwa okubonakalayo kokuthi yazi ubunikazi obungoqobo balawo makhasimende lapho kwenziwe khona ukuhlola. Inqubomgomo isebenza kubo bonke abasebenzisi enkundleni futhi ilandelwa yibo bonke abasebenzi benkampani, abaxhumanisi, basehhovisini, abanikazi nabaqondisi.
Ukusebenzisa indlela yengcuphe njengengxenye ye-KYC & AML Compliance, i-Paxful ithathe izinyathelo ezilandelayo:
Umhlangano noMphathi Omkhulu Wokuhlonishwa Kwemithetho onezinga elifanele lekhono nokuzimela, unomthwalo wokuphatha kokuphathelene nokuhlonishwa kwemithetho efanele, izimfuneko kanye nemihlahlandlela yemboni;
Ukuqalisa nokunakekela Inqubomgomo ye-KYC yengcuphe, Customer Due Diligence (CDD), neand Enhanced Due Diligence (EDD);
Ukuqalisa ukubophezela okususelwe engcupheni kokuqinisekiswa kwabasebenzisi Benkampani (bhekisela kule Phosti yebhulogi);
Ukuthobelana nezicelo zokuphoqelelwa komthetho nezimfuneko zokulawula zendawo;
Ukugcwaliswa kwe-Suspicious Activity Reports (“SARs”);
Uqeqesho olubanzi lwe-BSA/AML/OFAC;
Ukusetshenziswa kwamasistimu ahlukahlukene aphikisana nobugebengu;
Ukuqaphelwa komsebenzi osuselwe emthethweni oqhubekayo;
Ukuphenya kusetshenziswa ukuhlaziya kwe-blockchain;
Sifayela ama-SAR uma sazi, sisola noma sinesizathu sokusolela umsebenzi osolisayo ukuthi wenzekile kwinkundla yethu. Umsebenzi osolisayo ngokuvamile yilowo ongahambisani nebhizinisi elaziwayo lomsebenzisi, imisebenzi yomuntu siqu noma okomuntu. Umsebenzi wethu Osebenza Ngezokuhambelana ubuyekeza futhi aphenye umsebenzi osolisayo ukucacisa ukuthi ingabe ulwazi olwanele luqoqiwe ukulungisa ukugcwaliswa kwe-SAR. Umsebenzi wethu Osebenza Ngezokuhambelana unakekela futhi asekele amarekhodi namadokhumenti asekelayo we-SAR agcwalisiwe.
Inkampani iphinde yamukela izinqubomgomo nezinqubo eziqhubekayo zesijeziso se-OFAC nezinqubo ezenzelwe ukuvikela ipulatifomu ekusetshenzisweni kokuthengiselana okungavunyelwe, ngabantu abagwetshiwe noma ngenhloso yokubalekela, ukugwema noma ukweqa isijeziso kwase-U.S. nokomhlaba jikelele.
I-Paxful isebenzisana ngokuphelele ne-OFAC, Specially Designated Nationals (SDN) nohlu lwabantu abavinjelwe. Sicela ubheke isixhumanisi esilandelayo ngohlu lwenkampani lwamazwe avinjelwe lawo angavunyelwe ukusebenzisa inkundla ye-Paxful.
Lapho i-Paxful ikunikezele ngokuhumusha kwenguqulo yolimi lwe-English lwale nqubomgomo, lapho uyavuma ukuthi inikezele ngokufanela kuwe nokuthi izinguqulo zolwimi lwe-English lenqubomgomo luzobusa ubudlelwano bakho ne-Paxful. Uma kukhona ukugxubuzana phakathi kwenguqulo yolwomi lwe-English lenqubomgomo nokushiwo ukuhumusha, inguqulo yolwimi lwe-English izolawula.